Football Khabar » लिभरपुलद्वारा ‘फ्लप कोउटिन्हो’ फर्काउने ढोका खुला, मूल्य कति ?
लिभरपुलद्वारा ‘फ्लप कोउटिन्हो’ फर्काउने ढोका खुला, मूल्य कति ?
इंग्लिस क्लब लिभरपुलले आफ्ना पूर्वखेलाडी फिलिपे कोउटिन्हो फर्किने ढोका खुला गरेको छ । अघिल्लो सिजन लामो रस्साकस्सीपछि १४५ मिलियन पाउन्डमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका कोउटिन्हो क्याम्प नोउमा ‘फ्लप’ लिभरपुलले कोउटिन्हो फिर्तीबारे चासो बढाएको हो । अघिल्लो सिजन बार्सिलोनाले महत्त्वकांक्षी योजनासाथ ब्राजिलियन कोउटिन्होलाई १६० मिलियन युरोमा अनुबन्ध गरेको थियो । तर, बार्सिलोनामा कोउटिन्होले दोस्रो सिजन फितलो प्रदर्शन गरेपछि बार्सिलोना ब्राजिलियन खेलाडीको विकल्प खोजिरहेको छ । भर्खरै सकिएको सिजनमा बार्सिलोना युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे फुटबलबाट आउट हुँदा कोउटिन्होले कमजोर प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसपछि बार्सिलोनाले टोलीका दर्जन खेलाडी बेच्ने तयारी गरेकोमा उसले केही खेलाडीको बिदासमेत गरिसकेको छ । कोउटिन्हो हालल राष्ट्रिय टिमबाट कोपा अमेरिका खेल्न ब्राजिलमा रहेका छन् । ब्राजिलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका उनले पनि बार्सिलोनाको आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । यसैबेला लिभरपुलले आफ्ना पूर्वस्टार खेलाडीलाई फर्काउने संकेत गरेको हो । कोउटिन्हो पूर्वक्लब फर्किन राजी भएर लिभरपुलले बार्सिलोनासँग बोली लगाउन तयार रहेको चर्चा सुरु भएको छ ।
गत सिजन उनले बार्सिलोनामा सबैखाले प्रतियोगिताबाट कूल ५३ खेल खेल्दै ११ गोल गरेर २ गोलका लागि असिस्ट गरका थिए । जबकि, लिभरपुलको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोउटिन्होका लागि बार्सिलोनाको यो निकै खराब तथ्यांक हो । खास गरी बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले कोउटिन्होलाई प्रयोग गर्न नजान्दा कोउटिन्होले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसेकेको बताइन्छ । लिभरपुलमा अट्याकिङ मिडफिल्डरको भूमिकाबाट खेल्ने कोउटिन्होलाई बार्सिलोनामा भाल्भर्डेले फरक–फरक पोजिसनबाट खेलाउने गर्छन् । जसका कारण उनले आफ्नो लयमा प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यसकै कारण कोउटिन्होलाई भाल्भर्डेले कमै मात्र सुरुआती टिममा विश्वास गरेका थिए ।
बार्सिलोनामा ‘फल्प’ बनेका कोउटिन्होलाई लिभरपुलले पुनः एनफिल्डमा फर्काउन तयार रहेको खबर इंग्लिस मिडियाले प्रकाशित गरेका छन् । लिभरपुलका कोच जोर्गेन क्लोपको योजनामा लिभरपुलले कोउटिन्होका लागि ढोका खुला गरेको छ । तर, त्यसका लागि उसले बार्सिलोनालाई बढीमा १०० मिलियन पाउन्डभन्दा बढी खर्च गर्ने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । क्लोप र कोउटिन्होबीच निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । कोउटिन्होले क्बल छाडेपछि लिभरपुलले लगातार दुई सिजन च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल्दै एकपटक पराजित भयो भने दोस्रोपटक उपाधि जित्यो । बार्सिलोनालाई सेमिफाइनलमा लिभरपुलले नै पराजित गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति १६ असार २०७६, सोमबार १२:४३